Ku guuleysta qaab-dhismeedka UTM si aad uqaybgaliso Geofumadas - Geofumadas
Sebtember, 2013 Downloads, Geospatial - GIS
Waqti xaddidan waxaan bixin doonaa shaxanka ah "Beddelka isku-duwaha UTM-yada joqoraafi ahaaneed", kobcinta Geofumadas.
Iyada oo qaab-dhismeedkaas waxaad ku qori kartaa mid Isku duwaha UTM, tusaale ahaan: X = 1,740,564.29 Y = 3,396,718.08, oo tilmaamaysa xNUMX aagga waqooyiga. iyo Spheroid GRS19, oo markaa waxaad heli doontaa qaabka ugu sarreeya ee dhererka, daqiiqadaha iyo daqiiqadaha sida ku cad muuqaalka.
Laakiin template ah aan horey wax ogtihiin, laakiin ka mid ah wadataa dheeraad ah degrees, daqiiqo oo seconds, sidoo kale wadataa ee format tobanle iyo concatenated Laata, Lon sida ku cad qaabka image soo socda.
Sida caadiga ah kharashka kharashka 4.99 US dollars, laakiin maalmo yar gudahood waxaa loo heli karaa in lagu soo rogo bedelida dallacaadaha Geofumadas. Tirada ayaa xadidan.
Waa kuwan xeerarka dallacsiinta:
1 Waa inaad faallo ka bixisaa bogga Geofumadas, forum, blog ama bog. Tani waa inay la xiriirto maadada aad kor u qaadayso (injineernimada, tiknoolajiyada, kartoonka, GIS, Google Earth, iwm). Fiiri qaybaheena, waxaadna arki doontaa in mawdu uu ka sii ballaadhan karo kuwii hore. Ma aqbalno dallacsiinta Twitter ama Facebook.
Haddii goobta aad tahay adiga, waa sahlan tahay maxaa yeelay waxaad ku dari kartaa maqaalkii hore. Haddii aadan haysanin goobta, waxaad samayn kartaa sidaad uga faalloon karto maqaal ama ka soo geli karto qof kale oo goobta ah laakiin leh ixtiraam lagama maarmaan ah. Ma xiiseyneyno spam ama faallo ka bixin laheyn faallooyinka.
2. Faalladaada aad ka sameyso goobta waa in ay noqoto mid dabiici ah, mana aqbalno faallooyinka sida:
- Geofumadas, waa wax weyn
- Waxaan kugula talinayaa Geofumadas, waxaa jira waxyaabo badan oo loo akhriyo
Sidaa daraadeed aynu ka taxaddarno in aad tahay hal-abuur, ka qayb-qaadashada wax-ka-wadahadalka, adoo tixraacaya bogga ugu muhiimsan ee Geofumaadas (http://geofumadas.com)
Sidaas darteed, haddii aad xiiseyneysid qaab-dhismeedka, u soo dir codsigaaga.
3 Faallooyinka waa in la ansixiyaa cida goobta ku jirta, sidaas darteed waa inaad ka warqabtaa taas.
[form-contact contact form = '3']
Ha sameynin kobcinta kahor inta aan aqbalno, sug jawaabtayada ama soo jeedintaada si aad u kobciso.
Waanu jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodno. Haddii aad qabto wax shaki ah, nala soo xiriir: tifaftiraha (at) geofumadas.com
Fiiro gaar ah: Dallacaadda ayaa dhacday.
Post Previous«Previous Diiwaangelinta Toddobaadka MundoGEO Webinar ayaa furan
Post Next OkMap, ugu fiican ee la abuuro oo wax ka beddelo khariidadaha GPS. BILAASH AHNext »
10 Jawaab in "Ku guuleysta shaashadda UTM ee juquraafiyada kor u qaadaysa Geofumadas"
Anghel Asitimbay isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira barnaamijyo badan oo caawiya sameynta isdhexgalka ee isuduwayaasha, badanaa laakiin laakiin waa inaad gelisaa xog hal keliya oo waqti dheer qaadata haddii aad hayso macluumaad badan, sida ay bogga u muujiso inaan u arko mid aad u xiiso leh oo ay noqon doonto mid waxtar leh qalabkan.
U dir soojeedintaada, tilmaanta meesha aad ku qaban lahayd.
Miguel Collado isagu wuxuu leeyahay:
Dhiirigaan ma la heli karaa?
Waxaan jeclaan lahaa inaan daabaco mid ka mid ah makhraatkaagaaga boggeyga, iyo kuwo kale.
Tomas Urbano isagu wuxuu leeyahay:
Qiimaha mawduucan waa mid aan qaali ahayn. Qiime sababta oo ah waxay ka caawisaa xirfadlayaasha badan oo ka shaqeeya meelo kala duwan si ay u xalliyaan masalooyinka UTM Iskuduwidda Isbedelka Juqraafiga iyo kan kale. Sidoo kale isbedelka tirada badan ee Datum.
Geofumadas waa mid aad u fiican, maqaalada daabacan ayaa iga caawiyey wax badan oo aan ku barto nafsad ahaanteyda meelaha qaar oo cusub. Iyada oo tiknoolajiyada isbeddelaya, geofumadas waxay ii ogolaaneysaa inaan kala saaro waxa aan u baahanahay iyo waxa aan ka helayo mid adag, tani maaha wax yar. Hambalyo ayaan u dirayaa dadka GeoFumadas, waxaanan rajeynayaa inay sii wadaan inay naga caawiyaan sanado badan oo dheeraad ah.
Eddy Aliano isagu wuxuu leeyahay:
Waa VADEMECUM ee codsiyada sayniska jimicsiga oo u oggolaanaya; xusuusto, sheeg, ka doodidna xalliyaan su'aalo badan oo ku saabsan maadooyinka iyo qalabka. Waa isku xirnaansho fiican oo kudhaca kuwa sida badan dhaca.
Mauro Rios isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo, PAGE ONE xiiso leh, AGIL, AMA LEEXASHADA POINT wuxuu qaadanayaa MAWDUUCA la RAADINAYO.
HALKEYGA WAXAAN U BAAHAN TAHAY IN AAD KA QAADIN DOORASHOOYINKA GEOGRAPHIG IYO WAXAAD SAMAYNAYAA.
Lina María Cerón Gómez isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaadka ku jira boggan ayaa aad u faa'iido u leh xirfadlayaasha kala duwan ee shirkadaha kala duwan ee injineernimada, kuwaas oo, sababtoo ah hawshayada xirfadeed ee kala duwan, waxay ubaahanyihiin aqoon gaar ah oo ku saabsan hababka macluumaadka juqraafiyeed ee kala duwan.
Guillermo Alfonso Robledo Méndez isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaadka laga helay on this page ayaa i caawiyey si ay u maareeyaan aan MobileMaper6 taas oo ahayd laba sano oo tiliches dhaansha la'aanta macluumaad qaabeynta iyo mahad user a of this site ka heli karto macluumaadka loo baahan yahay oo ku qumman yahay, waayo, si aan u fuliyo shaqadayda Adeegyada Deegaanka.
Hugo salguero isagu wuxuu leeyahay:
waxtarka wanaagsan ee injineernimada topinikada, qalab fiican, mahadsanidadaa arintaan waxay sii wadaa in ay gacan ka geysato, salaan ku guuleysi badan.